November 4, 2020 - Babal Khabar
Nov42020 by बबाल खबरNo Comments
अहिलेसम्मकै अनौठो: बाढीले बगाएको सुटकेस खोलेर हेर्दा एस्तो भेटिए पछी प्र’हरीको समेत उड्यो होस !!
थाइल्यान्डमा एक जोडी चिनियाँ पतिपत्नीलाई जिउँ’दै सुटकेसमा राखेर नदीमा फा’लिएको प्रहरीले बताएको छ । मंगलवार अपराह्न वाङ जुनको शरीर का’लो सुटकेसमा पिङ नदीमा तैरि’रहेको पाइयो । प्रहरीका गोताखोरहरूले उनकी पत्नी झु बिङको शरीर खोजिरहेका छन् । झुलाई अर्को सुटकेसमा राखेर नदीमा डुबा’इएको विश्वास गरिएको छ । पट्टा’यामा यस जोडीले अन्य १३ जना चिनियाँ पर्यटकहरूसँग मिलेर तीनवटा भिल्ला भाडामा लिएका थिए । उनीहरू माघ २९ गते त्यहाँ पुगेका थिए । समूहका अन्य व्यक्तिहरू चीन फर्किसकेका छन् । जुनको शरीर सुट’केसमा खु’म्च्या’एर राखिएको थियो । उनको हात र गोडा रातो तारले बाँ’धि’एको थियो । माझी सुतोन थापाथानले शरीर फेला पारेका हुन् । उनलाई सुटकेसमा कुहि’एको माछा छन् जस्तो लागेको थियो । उनलाई सुटकेसमा कुहि’एको माछा छन् जस्तो लागेको थियो । ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ****** ‘सु
Breaking- कोरोना माहमारीको बेलामा एउटै अस्पतालका १६ चिकित्सकले अचानाक दिए सामूहिक राजीनामा !!
वीर अस्पालको आकस्मिक विभागमा कार्यरत १६ चिकित्सकले बुधबार सामुहिक राजीनामा घोषणा गरे। यद्यपी राजीनामा स्वीकृत नभएसम्म उनीहरुले काम भने जारी राख्ने जनाएका छन। यसरी राजीनामा घोषणा गर्नेमा करारमा काम गर्ने चिकित्सकहरु छन। उनीहरुले अस्पतालका निर्देशकलाई सम्बोधन गर्दै बुधबार सामुहिक राजीनामा दिएका हुन्। राजीनामा घोषणा पत्रमा उनीहरुको मुख्य माग दशैं तिहारको भत्ता नदिएको, एक दिन तलब कट्टा गरेको उल्लेख गरेका छन। यस्तै कोरोनाका समयमा उपर्युक्त स्रोत सामाग्री उपलब्ध नगराएको आरोप उनीहरुले व्यवस्थापनलाई लगाएका छन। उनीहरुले अस्पतालका निर्देशकलाई सम्बोधन गर्दै बुधबार सामुहिक राजीनामा दिएका हुन्। राजीनामा घोषणा पत्रमा उनीहरुले लेखेका छन, ‘हामीलाई ज्यालादारी भनेर दशैंतिहार भक्ता नदिने, एकदिनको तलब कट्टा गरेर दिएको, उपयुक्त स्रोत सामाग्रीको उपलब्ध नगराएको र धक्मीयुक्त आवाजमा हप्तामा ९६ घण्टासम्म कार्य ग
देशमा कोरोना फेरि भयावह बनेको भन्दै भोलि बिहीवार देखि १ महिना पुरै लकडाउन गर्ने सरकारको निर्णय । पूरा विवरण सहित । कार्तिक १९ । बेलायतले दोस्रो पटक बन्दीबन्दीको घोषणा गरेको छ । बेलायतले स्वास्थ्य तथा नैतिक संकट रोक्न भन्दै दोस्रो राष्ट्रव्यापी लकडाउन घोषणा गरेको छ । पछिल्लो निर्णय जारी गर्दै प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले क्रिसमस ‘निकै फरक’ हुन सक्ने बताएका छन् । महामारी नियन्त्रणका लागि उठाइएको कदमका कारण उक्त पर्वका अवसरमा परिवारका सदस्यहरूबीच भेट हुन सक्ने वातावरण निर्माण हुने विश्वास उनले व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री जोन्सनले रेष्टुराँ, व्यायामशाला र अति आवश्यक सेवामा नपर्ने पसल सबै चार हप्ताका लागि बन्द गरिने बताएका छन् । तर यसअघिको लकडाउनमा बन्द गरिएका विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई यस पटक खुला रहन सक्नेगरी निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ । ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यह
BREAKING:>> तिहारको मुखैमा काठमाडौंबासीलाई आयो अत्यन्त दुःखद खबर !!
तिहारको मुखैमा काठमाडौंबासीलाई आयो अत्यन्त दुःखद खबर !! काठमाडौं उपत्यका थप एक हजार ४ सय ६८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ।स्वास्थ्य मन्त्रालयले मंगलबार दिएको जानकारीका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा थप एक हजार ४ सय ६८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। जसमध्ये ६ सय ४९ जना महिला छन् भने बाँकी ८ सय १९ जना पुरूष हुन्।काठमाडौंमा ६५ हजार ७ सय ८८ जना कोरोना संक्रमित छन्। त्यसमध्ये ४९ हजार ६ सय ७६ जना निको भइसकेका छन् भने २४९ जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै, १५ हजार ८ सय ६३ जना संक्रिय संक्रमित छन्। यसैगरी, भक्तपुरमा ५ हजार ९ सय ६६ जना कोरोना संक्रमित छन्। त्यसमध्ये ४८७९ जना निको भइसकेका छन् भने ६८ जनाको मृत्यु भएको छ। संक्रिय संक्रमित १०१९ जना छन्। त्यस्तै, ललितपुरमा ९३१४ जना कोरोना संक्रमित छन्। त्यसमध्ये ६९८७ जना निको भइसकेका छन् भने ६३ जनाको मृत्यु भएको छ। संक्रिय संक्रमित २२६४ छन्। ******
BREAKING NEWS : सम्पुर्ण नेपालिहरुका लागि फेरि सरकारले गर्यो यस्तो घातक निर्णय !
Breaking News : सम्पुर्ण नेपालिहरुका लागि फेरि सरकारले गर्यो यस्तो घातक निर्णय ! स्वास्थ्य मन्त्रालयले शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल टेकुमा भर्ना हुने कोरोना संक्रमित बिरामीको लागि उपचार शुल्क तालिका सार्वजनिक गरेको छ।सार्वजनिक शुल्क गत शुक्रबारदेखि लागू भएको छ। भेन्टिलेटर आवश्यक पर्ने जटिल अवस्थाका कोरोना संक्रमितलाई आइसियूमा भर्ना गर्न ५० हजार धरौटी बुझाउनु पर्नेछ।मन्त्रालयका अनुसार त्यसको दैनिक खर्च भने १५ हजार लाग्नेछ। त्यसैगरी भेन्टिलेटरबिनाको आइसियू र क्याबिन आइसोलेसनमा त्यसैगरी भेन्टिलेटरबिनाको आइसियू र क्याबिन आइसोलेसनमा भर्ना हुन परेमा ३० हजार धरौटी बुझाउनुपर्नेछ। त्यसको दैनिक खर्च भने ७ हजार ५ सय हुनेछ।मध्यम जटिल अवस्थाका बिरामीहरूका लागि ग्यास्ट्रो आइसोलेसनमा भर्ना गर्न परेमा २० हजार धरौटी बुझाउनुपर्नेछ भने दैनिक तीन हजार ५ सय खर्च लाग्नेछ। ***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यह
दुबई का’ण्ड भन्दै यी युवतिको हेर्नै नसकिने कामुक भिडियो सार्वजनिक !! ( भिडियो हेर्नुहोस)
दुबई का’ण्ड भन्दै यी युवतिको हेर्नै नसकिने ३ मिनेट ४४ सेकेन्डको भिडियो सार्वजनिक( भिडियो हेर्नुहोस) अन्तिममा रखिएको छ हेर्नुहोला !! पछिल्लो समय पो’र्न हेर्नेहरुको संख्या बृद्दि हुँदै गइरहेको विभिन्न तथ्यांकले देखाएको छ | तर अ’श्लिल चलचित्र हे’र्नु हा’निका’रक हुन्छ, यसले जीवनमा ठुलो स’मस्या नि’म्त्याउन पनि सक्छ | त्यो तपाईंको लागि घा’तक हुन सक्छ । एक अनुसन्धानका अनुसार जसले पो’र्न फि’ल्मबढी मात्रामा हेर्छन् उनीहरुको जीवनमा रो’मान्स कम हुँदै जान्छ । उनीहरुलाई डे’ट, कसैसँगको भे’टघाट र रमाइलोले खासै अ’सर पर्दैन । किन भने उनीहरुले यी सवैमा भन्दा पो’र्न हेर्न मै आ’नन्दको महशुस गर्छन् । *** पूरा भिडियो हेर्न तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला *** अनुसन्धानका अनुसार स्थिती त्यतिबेला ख’राब हुनसक्छ जब तपाईंलाई डेटिङमा जानुभन्दा पो’र्न हेर्न राम्रो लाग्न थाल्छ । यस्तो अवस्थामा तपाईंको आत्मविश्वास ख’स
बहादुर नेपाली चेली : विदेशमा नेपाली चेलीले चम्काइन नेपालको नाम, विश्वभर भयो चर्चा !! (भिडियो)
अस्ट्रेलियाका मिडियामा नेपाली युवती चर्चामा छाएकी छिन्। लु’ट्न आएको लु’टेरालाई च’क्कु देखाएर धपाएपछि उनको सर्वत्र चर्चा भएको हो। न्यु साउथ वेल्सको अबर्नमा रहेको मार्टमा काम गर्दागर्दै लुटेरा मार्टभित्र छिरेर नेपाली युवती पवित्रा कार्कीलाई ड’र देखाउँदै पैसा मागेको थियो। तर पवित्रा कार्कीले भान्सामा प्रयोग गरिने च’क्कु देखाउँदै लु’टेरालाई नै भगाइदिइन्। स्थानिय मिडियाले उनलाई साहसी युवतीको रुपमा चि’त्रित गर्दै घट’नाको बारेमा समाचार प्रकाशन गरेका छन्। ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला **** यो पनि पढ्नुहोस् , बिहिबारको दिन यी कार्य भुलेर पनि नगर्नुहोस, नत्र यस्तो असर पर्ला ! बिहिबारलाई धार्मिक दिन मानिन्छ । ब्रम्हाण्डमा अवस्थित ९ ग्रहको गुरु मानिने वृहस्पतिको दिन मानिने बिहीबार धार्मिक दृष्टीले महत्वपूर्ण मानिन्छ । बिहिबार गरेका धार्मिक कार्यको फल तत्काल मिल्ने
नेपाली भूमि कब्जा गरिएको विषयलाई लिएर अन्त:त चीनले दियो एस्तो जवाफ !!
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले नेपालको कुनै पनि भूमि नमिचेको दोहर्‍याएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले चीनले नेपालको भूमि कब्जा गरेको भन्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारहरु हल्ला र आधारहीन भएको बताएका हुन् । चीनले नेपाली सीमा मिचेको बारे नेपालमा चर्को विरोध भइरहेको बेला चीनको यस्तो धारणा आएको हो । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले पनि नेपाली भूमि चिनियाँ पक्षबाट मिचिएको दाबी गरेको थियो। कांग्रेसको अध्ययन टोलीले गरेको स्थलगत अध्ययनपछि यस्तो आरोप लगाएको थियो। नेपालको सीमा मिचिएको बारे चीनले खण्डन गर्दै यो पूर्णरुपमा हल्लामात्र भएको र यसमा विश्वास गर्ने आधार नभएको दाबी गरेका छन्। सोमबार द टेलिग्राफले चीनले नेपालको १ सय ५० हेक्टर जमिन मिचेको र संरचनाहरु निर्माण गरेको भन्दै समाचार प्रकाशित गरेको थियो । उक्त समाचारको खण्डन गर्दै विदेश प्रवक्ता वेनबिनले नेपालको भूमि चीनले नमिचेको
केबल १३८ रुपैयाँमा पाइन्छ पुरै घर !! पत्यार लागेन ? पुरा खबर पढनुस
१३८ रुपैयाँमा पाइन्छ पूरै घर! सुन्दा अचम्मा लाग्छ तर तपाईको खाजा खाने पैसाले घर किन्न सकिन्छ है, यदी तपाई बिदेशमा हुनुहुन्छ भने! मानिसहरुलाई एउटा राम्रो घर किन्न जीवनको अधिकांश कमाइ खर्च गर्नुपर्छ । जीवनभरको कमाइले घर किन्न नसक्नेहरु पनि धेरै छन् । तर, युरोपेली देश इटलीमा भने मात्रै १ युरो अर्थात १३८ नेपाली रुपैयाँमा सिंगै घर किन्न पाइएको छ । इटलीको सिसिली प्रान्तमा रहेको एउटा सानो शहरमा यति सस्तो मूल्यमा घर बेचिँदैछ । भिडियोको लागी तल थिच्नुस । यो शहरको नाम सलेमी हो । यहाँ यति सस्तो मूल्यमा घर बेचिँदैछ भन्ने कुरा विश्वास गर्न निकै कठिन हुन्छ तर यो सत्य हो । र, यहाँ यति सस्तो मूल्यमा घर बेचिनुको पछाडि खास कारण छ । सीएनएनको एक रिपोर्टअनुसार पछिल्ला केही वर्षहरुमा यहाँका साना साना बस्तीहरुमा जनसंख्या निकै तब्रि रुपमा घटिरहेको छ । यही कारण यी साना बस्तीहरुमा यति कम मूल्यमा घर बेचिँदैछन्